JFK kwupụtara. Booksfọdụ akwụkwọ nwere ọgụgụ ya n'okirikiri | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
JFK kwupụtara. Booksfọdụ akwụkwọ nwere ọgụgụ ya na ndabere
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Novela, Black akwụkwọ
Ha dị declassify akwụkwọ banyere igbu ọchụ nke John Fitzgerald Kennedy, JFK. Edere otutu akwukwo banyere onye isi ala kachasi ike na mba United States. Anyị na-ahụ ndị a taa Isi 5 ya na onu ogugu ya dika onye mbu ma obu ihe omuma nke ndi mmadu ato a ama ama nke onye nta akuko Philip Shenon na ndị dere ya Stephen King na James Ellroy. Atọ nke echiche, akụkọ ihe mere eme na akụkọ nta akụkọ, akụkọ sayensị na akụkọ ifo banyere otu n'ime ihe odide kachasị mkpa na narị afọ nke XNUMX.
1 JFK Case Mepee - Philip Shenon
3.2 Isii n'ime ndị ukwu
3.3 Ọbara rụrụ arụ
JFK Case na-emeghe - Philip Shenon
Philip Shenon ọ bụ onye nta akụkọ na-eme nchọpụta na The New York Times na Washington, ebe ọ rụrụ ọrụ kemgbe 1981. Ọ bụ n’oge opupu ihe ubi nke afọ 2008 ka ekwentị ya kụrụ otu ụbọchị na ntanetị akwụkwọ akụkọ ya. Ọ bụ onye ọka iwu dị mkpa nke so na ndị ama ama Warren Commission ndị nyochachara ogbugbu nke JFK. Nwoke ahụ gwara ya ka o kwuo ihe ndị òtù kọmitii ahụ maara ndị ka dị ndụ.
Ya mere odeakụkọ malitere ọrụ afọ ise ka wughachi ihe ezoro ezo nke otu n'ime nyocha kachasị mkpa na arụmụka nke ihe mere na narị afọ gara aga. Ma akwụkwọ a pụtara ọtụtụ ihe karịa. Shenon chọpụtara na akabeghị ọtụtụ eziokwu banyere ogbugbu Kennedy, na ọtụtụ e zobewo ma ọ bụ bibie ihe àmà site n'aka ndị CIA, ndị FBI na ndị ọzọ dị ike na Washington.
Site na ọtụtụ narị ajụjụ ọnụ na ịnweta ndị a dị ndụ na Warren Commission na ndị ọzọ na-agụ akụkọ, Shenon wuru a Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akaụntụ doro anya nke mgbu mmadu JFK na nyocha adabaghị. Anyị na-ahụkwa akụkọ mgbe ochie dị ka Jacqueline Kennedy na Robert Kennedy, J. Edgar Hoover ma ọ bụ Lyndon B. Johnson.
Olee otú ọ gaghị amaja na JFK nna ukwu nke ụjọ na karia otutu Stephen Stephen? Yabụ n'afọ 2012, ebipụtara m akwụkwọ a na akụkọ banyere Jake na-eri nri, onye nkụzi Bekee na obere obodo dị na Maine. Otu ụbọchị otu n'ime ụmụ akwụkwọ toro eto ya, Harry Dunning, dee edemede na-emetụta gị. Isi okwu a bụ "Mybọchị Ndụ M Gbanwere" na Dunning kwupụtara ihe mere n'abalị nna ya lọtara mmanya na-egbu nne ya, nwanne ya nwoke na nwanne ya nwanyị. O jisiri ike zoputa onwe ya.
N’oge na-adịghị anya, Al, enyi Jake, chọpụtara nnukwu ihe nzuzo: n’ụlọ nkwakọba ihe nke ụlọ nri ya ọ chọtara ọnụ ụzọ na-eduga na 1958. Al jụrụ Jake ka ọ laghachi azụ oge iji zute a ozi, nke bụ nke ahụ, iji gbochie ogbugbu nke Kennedy.
otú Jake gara 1958 ịmalite ndụ ọhụrụ na njirimara ọhụrụ wee chere ruo 1963. Ọ ga-enyekwa ya oge ka ọ hụ onye ọbá akwụkwọ mara mma n'anya. Sadie dunhill, lebe anya Lee Harvey Oswald na ezi na ụlọ nke nwa akwụkwọ ya bụ Harry Dunning ka ọ zere ọdachi ya. Jake makwa na mgbe ọ lọtara, naanị nkeji abụọ agaala ụwa ya. Ma ajụjụ bụ ịmata ihe mgbanwe ndị ọzọ kpasue iwe gị ma ọ bụrụ na ị ga - enwe ike hapu nwanyi nke ndu ya na mgbe gara aga.
American Trilogy - James Ellroy
Jack Kennedy bụ isi akụkọ ifo maka ibe na-atọ ụtọ na akụkọ ntolite anyị. O nwere olu okwu mara mma ma tinye isi ya dika nke ozo. […] Egburu Jack na oge kachasị mma iji hụ na ịdị nsọ na ụgha na-aga n'ihu na ire ọkụ ebighi ebi ya. Oge erugo ịhapụ urn ya ma kpughee ụmụ nwoke ole na ole nyere aka na ịrị elu ya ma mee ka ọdịda ya dị mfe.
Nke ahụ na-ede James ellroy na mmalite nke America, aha mbụ nke a trilogy dị mkpa maka onye ọ bụla nwere mmasị na oge ahụ na ihe osise kachasị dị egwu nke ihe odide ya. Na Rabid nkịta, Nna-ukwu nke akwụkwọ akụkọ obi ọjọọ na ime ihe ike, o dere usoro mmụta a n'emeghị nkwenye. N'ezie na gị akpan akpan na pụrụ iche ịke kpọmkwem, mgbasa, telegraphic, ime ihe ike na mgbagwoju anya.
Ihe omume ndị a na-akọ na trilogy a na-amalite na 1958 wee kwụsị na 1972. Ellroy na-eji akụkọ ifo ma eziokwu na a unabashed mix nke akụkọ ihe mere eme na akụkọ ihe mere eme na akụkọ ifo onye ọ na-adịghị asọpụrụ. Akụkọ na akwụkwọ akụkọ ojii jikọtara na nnukwu ọrụ a, ihe siri ike mana ọ na-ewute ma na-enye nsogbu.
Anyị nọ n'ime 1958 na anyị nwere nhazi akụkọ dika esi eme ihe na ndi mmadu ato. Pete bondurant, Nnukwu Pete, a ebenwa_ndé onye bụbu onye mmiri, onye nrụrụ aka rụrụ arụ, onye na-apụnara mmadụ ihe maka Howard Hughes na ogbu ọchụ maka mobster Mickey Cohen. Nke mara Kemper boyd, FBI gị n'ụlọnga, iwu gụsịrị akwụkwọ na a nwaanyị na mahadum. Na Ward J. Littell, ọkachamara n'ihe banyere nkwukọrịta FBI, nwere nwa nwanyị, nwunye ọ lụrụ, na-enwe nsogbu ị alcoholụbiga mmanya ókè, na-atụ ụjọ, mana ọ na-akwụwakwa aka ọtọ.
Ndị ikom atọ a ga-agafe ndụ ha n'ọchịchịrị Ellroy nke afọ ndị ahụ esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nrụrụ aka ndị uwe ojii, nsogbu na Cuba na esemokwu agbụrụ ụzọ niile ruo ụbọchị tupu ogbugbu JFK.
Isii n'ime ndị ukwu
Lee anyị nọ na ya 1963 na ndị protagonists ka Pete Bondurant na Ward J. Littell. Ha na ha pụtara onye ọrụ FBI ọzọ, Wayne Tedrow Jr., onye ji $ 6.000 n’akpa ya bịarute Dallas iji gbuo Wendell Durfee, onye ojii ojii nke eboro ebubo idina mmadụ n’ike na igbu ọchụ. Ugbu a, akụkọ ifo na-agwakọta na eziokwu ebe ha nọ Bobby Kennedy ma ọ bụ Malcom X. Agbụrụ agbụrụ gara n'ihu na Ku Klux Klan. Ọzọkwa, anyị na-eji ụkwụ agafe Las Vegas ma ọ bụ Vietnam na a awụ akpata oyi n'ahụ si 60s.
Ọbara rụrụ arụ
Aha nke ato etinyela anyị 1968. Martin Luther King na Robert Kennedy anwụọla. Ma ugbu a Wayne Tedrow Jr. Ọ bụ onye na-ere ahịa heroin, ọ na-ewukwa mafia na-egwu egwuregwu mecca, ọ na-agbasikwa ike n'echiche ya. Ha so ya gafere Don cructhfield, a onwe onye nchọpụta, na Dwight holly, onye ọrụ ọzọ na J. Edgar Hoover onye na-apụnara mmadụ ihe banyere nwanyị, Joan Rosen, onye ha kpọrọ Chi nwanyị na-acha ọbara ọbara ọ bụkwa ebumnobi ha atọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » JFK kwupụtara. Booksfọdụ akwụkwọ nwere ọgụgụ ya na ndabere
Ihe omuma nke Octavio Paz
November protagonist nke akwụkwọ. Titlesfọdụ utu aha raara nye ọnwa a